I-MS Plain i-Weave Wire Mesh
Uthotho lokucoca ulwandiso
itafile yesinyithi ecwengileyo yentsimbi ekwimo engqukuva
Umnatha wocingo oqhelekileyo Ngamanye amaxesha ezi zihluzo zikwabizwa ngokuba ziipakethe zescreen, zombini zithetha into enye.
Izikrini ze-extruder ziyimfuneko kuyo nayiphi na into ekhupha iipolymer okanye iplastiki. Siza kuvavanya zonke izinto ezikhutshelwa ngaphandle kweli nqaku, ukusuka kwiingcaciso ukuya kumaxabiso ngendlela ezenziwa ngayo.
Iscreen se-extruder sikwiindidi ezahlukeneyo zocingo olucoliweyo. Izinto ikakhulu intsimbi plain, steel stainless kunye nezinye izinto. iipakethe zescreen sensimbi ziyamelana nomhlwa kunezinye izinto. Izikrini ze-Stainless extruder Screens zisetyenziswa ngokubanzi kwiphepha leplastiki, igranulator, kunye namalaphu angenalukhuni, umbala we-masterbatch, njl. ....
Isefu ayisiyentsimbi okanye ingxubevange; yinkqubo apho isongezo se-zinc sifaka isinyithi ukuthintela ukurusa. Kwicandelo lemveliso yocingo, nangona kunjalo, ihlala iphathwa njengodidi olwahlukileyo ngenxa yokusetyenziswa kwayo ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zezicelo.I-Wire Mesh eyenziwe ngocingo lwentsimbi. Ikwanokwenziwa ngocingo lwesinyithi emva koko ukutyabeka i-zinc kwalenza. Ngokubanzi, olu khetho lubiza kakhulu, kodwa lubonelela ngenqanaba eliphezulu lokumelana nokubola ...
Isinyithi esinyithiweyo, ekwabizwa ngokuba yintsimbi yekhabhoni, sisinyithi esisetyenziswa kakhulu kwicandelo lokwenza umnatha wocingo. Yenziwe ngokukodwa yintsimbi kunye nenani elincinci lekhabhoni. Ukuthandwa kwemveliso kungenxa yexabiso eliphantsi nokusetyenziswa kwayo ngokubanzi. Plain wocingo, eyaziwa ngokuba balck intsimbi ilaphu .black wocingo .it yenziwe ngocingo carbon sentsimbi ephantsi, ngenxa iindlela ezahlukeneyo ukuluka .can yahlulwe, aluka plain, aluka Dutch, herringbone aluka, plain Dutch ukwaluka. Plain steel wire umnatha na stro ...
Igama lezinto: I-epoxy camera i-wire netting kunye ne-wire mesh Material: Yenziwe ngocingo oluphezulu lwentsimbi, ucingo lwentsimbi engenasici, ucingo lwe-aluminium alloy, i-epoxy camera emva kokuluka okucacileyo. Imibala eyahlukeneyo yokukhetha kwakho. Iimpawu: ubunzima Light, bhetyebhetye elungileyo, nokumelana elungileyo kunye umoya, ukucoca lula, eqaqambileyo elungileyo kunye nokusingqongileyo. Ummandla wesicelo: Olu xwebhu lusebenza kwi-epoxy camera camera mesh (uhlobo lwelaphu; i-weave plain) ye-manufacturng pleated filter e ...
Yenziwe ngentsimbi eshinyeneyo. Ucingo lwentsimbi engenazingcingo luyakunxiba, ukumelana nobushushu, ukumelana ne-asidi kunye nokumelana nomhlwa. Amanqanaba ahlukeneyo entsimbi engenasici asetyenziswa ngocingo. imitshato eyahlukeneyo isetyenziswa kwizicelo ezithile zokusebenzisa ipropathi eyahlukileyo. Sivelisa umnatha wocingo kwiindidi ezahlukeneyo zeefom. Ukwaluka kugqitywe ngokweemfuno zabathengi, ezinje ngemathiriyeli, ubukhulu becala locingo, ubungakanani be-mesh, ububanzi kunye nobude ...
Umnatha wesinyithi owandisiweyo yinto yentsimbi eyenziwe ngumbumba owandisiweyo wokubetha kunye nokucheba umatshini ukwenza umnatha. Isixhobo: Ipleyiti yeAluminiyam, ipleyiti yentsimbi yekhabhon ephantsi, ipleyiti yentsimbi engenanto, ipleyiti ye-nickel, ipleyiti yobhedu, ialuminium ipleyiti yensimbi, njl njl. Umphezulu womnatha uneempawu zokuqina, ukumelana nomhlwa, ukumelana nobushushu obuphezulu, kunye nefuthe lokungenisa umoya. Iindidi: Isivumelwano ...
Senza i-Nickel Mesh, i-Nickel Wire Mesh, i-Nickel eyandisiweyo ye-Metal kunye ne-Nickel Mesh Electrode yeBattery. Ezi mveliso zenziwe ngomgangatho ophezulu, izinto zokucoceka eziphezulu ze-nickel. Sivelisa ezi mveliso silandela imigangatho yemizi-mveliso ngokungqongqo. I-Nickel Mesh inokuhlulwa ibe ziindidi ezimbini: Umnxeba wocingo weNickel (ilaphu yocingo le-nickel) kunye nensimbi eyandisiweyo yesinyithi. Umnxeba wocingo lweNickel usetyenziswa ikakhulu njengesixhobo sokucoca ulwelo kunye neelectrode yeselfowuni. Ziyalukwa ngocingo nickel ezikumgangatho ophezulu (ntumbuluko> 99,5 okanye pu ...